Wakiilka ciyaaryahan ka tirsan Kooxda Real Madrid oo xaqiijiyey in xiddigu uu doonayo inuu u dhaqaaqo horyaal kale – Gool FM
(Madrid) 24 Nof 2020. Wakiilka ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xaqiijiyey in xiddiga uu wakiilka u yahay uu doonayo inuu tijaabiyo ka ciyaarista horyaal kale ama dal kale.
Laacibka khadka dhexe ee Real Madrid, Isco ayaa go’aansaday inuu isaga tago garoonka Bernabeu kaddib todobo sanadood oo uu ku sugnaa, waxaana uu haatan qalbigiisa ku haystaa inuu u dhaqaaqo horyaal kale.
Wakiilka ciyaaryahan Isco ayaa xaqiijiyey in laacibka khadka dhexe ee Real Madrid uu go’aansaday inuu isaga tago garoonka Bernabéu marka ugu horreysa ee uu fursado helo, waxaana uu xusay inuu maanka ku hayo laacibku inuu isaga tago horyaalka La Liga si uu nafsad ahaantiisa u tijaabiyo Waddan kale.
28-sano jirkaan, kaasoo heshiiska uu kula jiro kooxda Real Madrid uu ku eg yahay sanadka 2022-ka ayaa hoos uga dhacay xulashada Tababare Zinedine Zidane kaddib markii uu soo laabtay Martin Ødegaard, waxaana uu ku soo bilowday kaliya saddex kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan illaa iyo hadda.
Kooxaha Everton, Arsenal iyo Manchester City ayaa la la xiriirinayaa xiddigan 38-da kulan u saftay xulka qaranka Spain, kaasoo Real Madrid ku sugnaa tan iyo sanadkii 2013-kii.
Wakiilkiisa ahna Aabihiis, Francisco Alarcón ayaa sheegay in Isco uu ka fikirayo inuu u dhaqaaqo dal kale, laakiin inuusan wax dhibaato ah ku qabin inuu sii joogo Madrid.
“Waqti xaadirkaan, mahaysanno wax dalabyo ah, laakiin Isco waxa uu doonayaa inuu tijaabiyo horyaal kale,” ayuu u sheegay Isniintii Warsidaha Cadena SER, waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray: “Joogitaankiisa Madrid wax dhibaato ah kuma qabo”.
Isco ayaa ku guuleystay labo horyaalka La Liga iyo afar Champions League oo lagu daro koobab kale tan iyo markii uu kooxda Real Madrid kaga soo biiray Málaga.
Si kastaba ha noqotee, markii ugu dambeysay oo uu ugu yaraan 20 jeer ku soo bilowdo safka hore ee horyaalka La Liga hal xilli ciyaareed gudihiis waxay ahayd fasal ciyaareedkii 2017-18.